मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय एवम् सांस्कृतिक तŒवहरूको जगेर्ना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कुटनीति, आर्थिक साझेदारितामा छिमेकीका अपेक्षाहरूसँग सन्तुलन मिलाउँदै राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्नु नै सुरक्षा हो । सुरक्षाको परम्परागत धारणा सेनालाई स्रोत निर्धारणको विशेषाधिकार प्राप्त हुन्छ भन्ने थियो तर आधुनिक मान्यताले सुरक्षाको स्तरको गम्भीरतालाई महŒव दिएको छ । सुरक्षाको केन्द्र राज्य सँगसँगै मानवलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा भएको व्यवस्था ः
संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व शान्ति, राष्ट्रहरूबीच आपसी सम्बन्ध, स्वाधिनता र न्यायका लागि स्थापित एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । सन् फ्रान्सिस्कोमा सन् १९४५ जुन २६ को बडापत्रमा हस्ताक्षर गरिएकोमा सन् १९४५ अक्टोबर २४ देखि यो बडापत्र लागु भएपछि यसको औपचारिक स्थापना भएको हो । यसको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको न्यूओर्कमा रहेको छ र यसका १९३ सदस्य राष्ट्र छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा १ मा निम्नलिखित उद्देश्यहरू उल्लेख गरिएको छ ः
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने ।
राष्ट्रहरूकोबीच मित्रवत् सम्बन्ध विकास गर्ने ।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा मानवीय चरित्रका अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको समाधान तथा सबैको लागि आधारभूत स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव:
हरेक विश्वव्यापी संकटले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली, संरचना र संस्थालाई गम्भीर असर गर्छ । भनिन्छ, ‘केही पनि फेरि सधैँ उस्तै रहँदैन ।’ कोरोनापछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आउन सक्ने परिवर्तनको प्रस्ट तस्विर अझै उस्तै रहँदैन । यो महामारी कहिलेसम्म रहला ? यसले कुन क्षेत्रमा कति धक्का देला ? र यसका पराकम्पन कहिलेसम्म बाँकी रहला भन्ने विषयले यसको बुहुआयामिक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ । युभल नोहा हरारी, अर्मत्यसेनहरूले कोभिड–१९ लाई स्वास्थ्य संकटकै रूपमा लिनुपर्ने दावी गरे पनि ब्रुनो मेसाइसजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरूले यसलाई महायुद्धकै रूपमा लिइरहेका छन् । यो महायुद्ध नभए पनि परिणामका हिसाबले यो तेस्रो विश्वयुद्ध नै हो । विश्व राजनीतिमा कोभिड–१९ ले ल्याउने परिणाम महायुद्ध सरह नै हुने देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बहुविषयगत र अन्तरनिर्भरताको विधा मानिएको छ । यस कारणले कोरोना संकटले मानव जातिमाथि पार्ने प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग अभिन्न रूपले जोडिन्छ । कोभिड–१९ को फैलावट प्रभाव न्यून गर्न सबै देशले ध्यान केन्द्रित गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय, क्षेत्रीय र वैश्विक राजनीतिको अन्तर्निहित गतिशीलता र यसलाई आकार दिने विदेश नीतिलाई पनि यसले गहिरो प्रभाव पार्दछ । यसले विश्वका हरेक मुलुकलाई राष्ट्रिय स्वार्थ मजबुत बनाउन आवश्यकताका आधारमा बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गराएको छ । त्यसैगरी विश्वभर संरक्षणवाद हाबी हुने संकेत देखा परेको छ । परिणाम स्वरूप कोरोना प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यावहारिकताको नयाँ शिरातर्फ धकेलेको छ । यस महामारीले विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा निम्न लिखित प्रभाव पार्ने देखिएको छ । जसमा (१) तत्कालीन प्रभावमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बन्द तथा स्थानीय देशहरूमा लकडाउन भएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देशले यसको फैलावट कम गर्नमा सफलता हात पारेका छन् भने केही प्रतिबन्धका रूपसमेत विश्वव्यापी रूपमा देखा परेका छन् । (२) मध्यकालीन प्रभावमा देशहरूले नयाँ वा अस्थायी साझेदारी खोज्न थाल्नेछन् । जुन कुरा महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणसँग पनि जोडिएर आउँछ । त्यसैगरी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न छिमेकीले भूमि, सीमा र आपसी सहयोगमा व्यापार सुरु गर्न सक्छन् । (३) दिर्घकालीन प्रभावमा देशहरूबीच गठबन्धन र रणनीतिक सहयोगका नयाँ परिदृश्य देखिन सक्छन् । परिणाम स्वरूप नयाँ राजनीतिक जग निर्माण हुन सक्छ । प्रथम विश्वयुद्धपछि लिग अफ नेसन र द्वितीय विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ गठन भएजस्तै नयाँ संगठन बन्न सक्छन् ।
वातावरणमा पारेको प्रभाव:
कोरोनाले सिर्जना गरेको असुरक्षा:
कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता, सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृति अभ्यासहरू पश्चिमी सभ्यता र पूर्वीय सभ्यतामा फरक–फरक छन् । आज विश्वभरि एक–आपसमा भेट हुँदा हात मिलाउने, अंकमाल गर्ने, गाला जुटाउने क्रियाकलाप नगरी पूर्वी सभ्यतानुसार नमस्कार गरी आदर र सद्भाव गर्ने खालका संस्कृतिको अभ्यास भइरहेको छ ।
कोरोना भाइरसले विश्वको पूरै आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विश्व आर्थिक मन्दीमा फस्न सक्ने खतराका संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।
कोरोना भाइरसका कारण समग्र विश्वको पर्यटन क्षेत्र धरासायी बनेको छ ।
कोरोना भाइरसको कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये रोजगारी प्रमुख क्षेत्र हो । विश्वमै हेर्दा अमेरिकामा अहिले बेरोजगार भत्ता लिन करिब डेढ करोड मानिसहरूले आवेदन दिएका छन् भने छिमेकी भारतमा झन्डै एक करोड मानिसहरूले रोजगार गुमाएको समाचारहरू प्रकाशित भइरहेका छन् तथा नेपालजस्ता कमजोर मुलुकको स्थिति के होला भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कोरोना भाइरसका कारण अहिले प्रायः औद्योगिक क्षेत्रहरू ठप्प छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पारवहन, लगानीका क्षेत्रहरू, आयात निर्यातजस्ता सबै क्षेत्रहरू प्रभावित भएकाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
वर्डफ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला, हालको कोरोना भाइरसजस्ता संक्रमणहरू कुनै न कुनै रूपमा वातावरणसँग जोडिएका छन् ।
प्रकाशित मितिः २६ आश्विन २०७७, सोमबार १२:१६